Vakinankaratra : Maherin’ny folo sahady no efa maty nilatsaham-baratra – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2016 → novembre → 10 → Vakinankaratra : Maherin’ny folo sahady no efa maty nilatsaham-baratra
Vakinankaratra : Maherin’ny folo sahady no efa maty nilatsaham-baratra
Redaction Midi Madagasikara 10 novembre 2016 0 Commentaire
Isan’ny tranga iray mampivarahontsana sy mampatahotra indrindra eto amin’ny faritra Vakinankaratra ity resaka varatra milatsaka ity. Saika ho isan-taona mantsy dia misy hatrany ny olona mamoy ny ainy vokatr’ity resa-baratra ity.
Hatramin’ny niandohan’ny fotoam-pavaratra izao dia efa tsy latsaky ny folo ny olona namoy ny ainy nilatsaham-baratra. Nanomboka azy ny tao amin’ny distrika Betafo, namoizana ain’olona efatra be izao tamin’ny niandohan’ny rotsakorana. Mivatravatra fiavy rahateo ny orana, miampy havandra sy kotrobaratra. Vokany , lehilahy lehibe iray no maty tsy drano raha tsiahivina tao Betafo, hivoaka hitery ronono izy io raha ny fantatra no nilatsaham-potaka tampoka ka tsy tana intsony ny ainy. Ankoatra izay, zaza 4 mpiray tampo koa no indray maty nipoahan’ny varatra nandritra io andro io hatrany. Avy any antsaha izy efatra kely ireo no tratran’ny orana ka nialoka teo am-body hazo, kanjo io nilatsahan’ny varatra io ka tsy nisy avotra na iray aza. Fa vao tsy ela akory izay tao amin’ny distrika Antanifotsy no nandrenesana fa olona 6 be izao no indray matin’ny varatra hatrany. Tao an-tsekoly no nirefotra ny varatra tao Ambatomiady ka zaza telo no voa, ny iray maty teo no ho eo fa ny roa kosa avotra soamantsara ihany ny ainy rehefa tonga tany amin’ny hopitaly. Tao amin’ny kaominina Ambatolahy indray , fantatra fa ora iray tamin’io nilatsahan’ny varatra io hatrany dia 3 mirahavavy avy nanetsa no maty tsy drano nilatsaham-potaka hatrany. Ankoatra azy ireto moa nisy roa lahy ihany koa no namoy ny ainy tao an-tranony, maty teo am-panamboarana “convertisseur” rehefa nilatsaka ny varatra ka nitontona tao amin’ny efitrano fiasany.
Mahery varatra ary saika amoizana olona hatrany ny andro fahavaratra eto amin’ny faritra Vakinankaratra, ao ireo milaza fa misy mandatsaka izy io, ary tsy hilatsaham-baratra mora foana ny olona iray fa hasomparanan’olona izy io matetika, ao koa anefa ireo milaza fa faritra halam-baratra ny eto Vakinankaratra.